Ukunta qurxinta waa shey aan u wada isticmaalno isku qurxinta. Waxaa jira noocyo badan oo ukumo isku qurxin ah oo suuqa yaala, laakiin saameyntu waa isku mid. Ka dib markaad isticmaasho ukunta qurxinta, nadiifinta waa lama huraan. Ma taqaanaa sida loo nadiifiyo ukunta qurxinta? Maanta, waxaan ku soo bandhigi doonaa tallaabooyinka nadaafadda ee quruxda e ...
Sida loo doorto barkin 2
Barkinta ugu fiican ee leh saameyn daaweyn ah oo ku dhaca qanjirrada ilmo-galeenka ayaa ah barkin xumbo ah oo kuleylka kuleylka ah. Guud ahaan, dadka qaba laf-dhabarka ilmo-galeenka oo liita waxay doortaan barkimooyin Kangjin Shule ah oo ka samaysan barkimo kuleylka kuleylka kuleylka ah, maxaa yeelay qaabka barkinku waa inuu marka hore la jaanqaado jir-dhiska caadiga ah ...
Barkin qaldan, oo ka cabaneeysa laf-dhabarka ilmo-galeenka Barkimooyinku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hurdada dadka. Barkin ku habboon ayaa kaa caawin karta inaad si macaan u seexato. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka muddada-dheer ee barkin aan habboonayn wuxuu sababi doonaa taxane ah noocyo isdaba-joog ah iyo xitaa inuu yeesho spondylosis afka ilmo-galeenka. Khubarada ayaa tilmaamay in xitaa ...
Taariikhda Shiinaha ee barkinta
Barkimadu waa nooc ka mid ah qalabka hurdada. Waxaa guud ahaan la rumaysan yahay in barkimooyinku yihiin filleyaal ay dadku u isticmaalaan inay si raaxo leh ugu seexdaan. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista caafimaad ee casriga ah, laf-dhabarka bini-aadamka waa xariiq toosan oo xagga hore ah, laakiin wuxuu leeyahay afar dhinac oo fiyoloji ah oo dhinaca ka soo laaban. Si loo ilaaliyo caadada ...
Sida loo doorto barkimooyinka xumbo ee xusuusta ugu fiican
Barkimooyinka xumbada Memory-du waxay ka kooban yihiin xumbo cufan oo dib ugu laabanaysa qaabkeedii hore hurdada ka dib waxayna caadiyan bixiyaan qoorta oo aad u fiican. Kuwani waa caan sababtoo ah waxay yareeyaan dhibcaha cadaadiska iyagoo si isdaba-joog ah u qaabeynaya una hagaajinaya qaabka jirkaaga sida aad ...
Bandhigga Ganacsiga E-Commerce ee Xudduudka Shiinaha (Cadaalad ah KWA)
Shiinaha Xudduudaha E-Commerce Trade Fair (Fair KWA) waa dhacdo ganacsi ganacsi oo loo qabtay si loo dhexgeliyo ilaha silsiladda bey'ada ee xudduudaha ka gudba ee xudduudaha ka gudba isla markaana siiya alaab-qeybiyeyaal tayo sare leh iyo fududeeye dhufaysyada xuduudaha iyo kuwa wax iibiya. Fair KWA waxaa la qabtaa laba jeer sanadkii guga a ...
Mawduuca Shiinaha ee 'Zodiac Theme Squishy Gel Pen' iyo Buugga xusuus-qorrada Waxaa soo dhaweynaya Macaamiisha Shiinaha iyo Shisheeye
Shirkaddeenu waxay leedahay laba iyo toban mawduuc xayawaanno xayawaan ah oo china ah iyo buug yar, oo ay abuureen naqshadeeyayaal badan, fikradaha wax soo saarkeenna waxaa ku dhiirrigeliya sheekooyinka bey'adeed ee Shiinaha ee dhaqanka Shiinaha. Burji Shiineysku waa xujo shiineys ah oo u dhiganta laba iyo tobanka laamood ee dhulka oo leh t ...